पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नि सिता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था खराब ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नि सिता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था खराब !
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नि सिता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था दिनहुँ बि’ग्रदै गएको बताइएको छ । उनलाई केही महिना अघि नेपालमा उपचार नहुने भएपछि उनको थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सिता दाहालको काठमाण्डौंको मेडिसिटीमा उपचार समेत गरिएको थियो तर उनको त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि भारत लगिएको थियो ।
प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराका अनुसार सिताको थप उपचारका लागि यसअघि पनि अमेरिका, सिंगापुर र भारत लगिएको थियो ।
प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले फेसबुकमा आमाको सि’कि’स्त अवस्थाको तस्वीर राख्दै आमा भनेर दुई वटा लभ इमोजी राखेकी छिन् । उनको स्टाटसमा सर्यौ कमेन्टहरु स्वास्थ्य ला’भको कामना गर्दै आएका छन् । तस्वीरमा दुई छोरीहरु आमासँग देखिन्छन् ।सिताको अवस्था तस्वीरमा नि’क्कै सि’किस्त जस्तो देखिएको छ । सिता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना।